मोदीराजको ठाडो नक्कल - फ्री प्रेस नेपाल
१२ मंसिर २०७५, बुधबार २२:००
२०७४ साउन २९ गते अर्थात १६ महिना अगाडि नै संसदद्धारा पारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ लागु भएको घोषणा गर्न रातारात शहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टका होडिङबोर्ड झुण्डिइसकेकाथिए । राजधानीबाट प्रकाशित हुने सबै दैनिकपत्र ११ मंसीरको एकाबिहानै ओली र बिष्टका तस्वीर सहितका ज्याकेट बिज्ञापन ओढेर घरघर छिरिसकेकाथिए ।
२०७४ साउन २९ गते अर्थात १६ महिना अगाडि नै संसदद्धारा पारित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४ लागु भएको घोषणा गर्न रातारात शहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टका होडिङबोर्ड झुण्डिइसकेकाथिए । राजधानीबाट प्रकाशित हुने सबै दैनिकपत्र ११ मंसीरको एकाबिहानै ओली र बिष्टका तस्वीर सहितका ज्याकेट बिज्ञापन ओढेर घरघर छिरिसकेकाथिए । प्रमुख अनलाईनहरुले ‘रोडब्लक बिज्ञापन’ हात पारिसकेकाथिए । टेलिभिजन च्यानलहरुमा सामाजिक सुरक्षाका प्रायोजित समाचार धुँवाधार प्रचार भैरहेकाथिए ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको यस कार्यक्रमको तामझामलाई ‘नयाँ युगको प्रारम्भ’ भनि ब्रान्डिङ गरिएपछि सामाजिक सन्जालमा सरकारको जमेर विरोध भो । मन्त्री विष्टले बिज्ञापनका सबै खर्च नीजि कम्पनीहरुले ब्योहोरिदिएको प्रष्टिकरण दिएकाछन् । बिज्ञापन हेर्दा कान्तिपुर दैनिकको बिज्ञापन मोबाईल कम्पनी एनसेलले प्रायोजन गरेको देखिन्छ भने नागरिक दैनिकलाई एनआईसी एशिया बैंकले स्पन्सर गरेकोछ । गोरखापत्रलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नयाँ पत्रिकालाई ग्लोबल आइएमइ बैंक, दि हिमालयन दैनिकलाई नबिल बैंक र दि राईजिङ नेपाललाई बुद्ध एयरको प्रायोजन गरेकोछ । त्यसैगरि अन्य मीडियामा पनि अन्य नीजि कम्पनीहरुको प्रायोजन देखिन्छ ।
२५ अर्ब कर नतिर्ने दुरसन्चार कम्पनी एनसेलले कान्तिपुरको आधा करोड पर्ने ज्याकेट बिज्ञापनमा लगानी गर्नुको अर्थ खोजिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम घोषणासभामा त्यस्तो आलोचनालाई सदा झैं आफ्नै शैलीमा उडाईदिए । ‘यो सरकार के गर्दैछ ? कहाँ छ ? भनियो । कतिले सरकारले सिन्को पनि भाँचेन । जुम्रा पनि मारेन । भने । यो सरकार जुम्रा मार्न बसेको हैन । सिन्का भाँच्न पनि बस्या हैन, देश बनाउन हो ।’ प्रम ओलीले भने –‘यो तामझाम किन भन्लान । यो तामझाम देखिन भन्नेहरुलाई देखाउन हो । सुनिन भन्नेहरुलाई सुनाउनलाई हो । अबका कार्यक्रम नौमती बाजागाजा बजाएर हुन्छ ।’
करिब एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत काम देखाउन नसकेको र त्यसको अपजस बोक्नु परिरहेको ओली सरकारले यो कार्यक्रमलाई एमालेको नौ महिने सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ’आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ को स्तरमा ब्रान्डिङ् गर्ने प्रयत्न गरेकोछ ।
गम्भीर विमर्श लुकाउने प्रपन्च
सरकारको तामझाम र सामाजिक सुरक्षाको नाममा ल्याईएको कार्यक्रममाथि जसरी समाचार लेखिएकाछन्, त्यसमा गम्भीर विषय गायब छ । मीडियालाई दिईएका लाखौं लाख बिज्ञापनले तिनले त नलेख्ने नै भए, सामाजिक सन्जालमा पनि बिजुलीका पोलमा टाँगिएका होडिङबोर्डका कुरा मात्र बढी गरिएकाछन् ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा यस अघिका सरकारले नै विशेष कार्यक्रम बनाएरै बजेट बिनियोजन गर्दै आएकोले प्रचार गरिए झैं यो नयाँ कार्यक्रम होईन । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि नियमित आय गर्ने करिब २० लाख करदाताबाट १ प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आईएकोछ । त्यसरी उठाईएको रकम २० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकोछ । त्यसबारेमा कुनै मीडियामा बहस गरिएकोछैन । कर्पाेरेट मीडियाले सरकारले जे बोलेकोछ त्यसैको लयमा लय मिलाई समाचार लेखेको देखिन्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका निम्ति कुल खर्चको ८.८ प्रतिशत बजेट छुट्याईएकोछ । यो बजेट आर्थिक बर्ष ०६९/७० मा दश प्रतिशत थियो भने आर्थिक बर्ष ०७१/७२ मा ९.८ प्रतिशत थियो । अहिले ल्याईएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले यो कमजोरीलाई पुर्न मद्दत गर्ने दावी गरिएकोछ । तर श्रमिकको श्रम समेत ठगेर खाने ‘मालिक’ हरुको बाहुल्य भएको हाम्रो जस्तो समाजमा यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा बहसमा उठेका छैनन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको करिब पौने घण्टा लामो भाषणमा यस्ता गम्भीर विषयमा प्रविष्ट नै गरिएकोछैन । उनको भाषणको अधिकाँश समय सदा झैं आलोचकहरुमाथि ब्यङ्ग्य गर्न र होच्याउनमा केन्द्रित थिए । नयाँ युगको शुभारम्भ भनि दावी गर्ने प्रधानमन्त्री स्वंयको दावी निकै प्रतिरक्षात्मक देखिन्थ्यो ।
यो तामझाममा सबैभन्दा बढी कमाईरहेका बैंक र बिवादास्पद मोबाईल कम्पनीहरु सरकारको समृद्धिको सारथी जस्ता देखिएकाछन् । यो शैली भारतमा मोदी सरकारले गर्दै आईरहेको विवादास्पद यस्तो शैली हो जसलाई ओली सरकारले कार्वनकपी गरेकोछ ।
ब्रोडकास्ट आडियन्स रिसर्च काउन्सिलले हालसालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले भारतीय जनता पार्टीले पाँच राज्यमा हुन गैरहेको विधानसभा चुनावी अभियानका लागि मीडियामा गरेको लगानी जिब्रो टोक्ने खालकोछ ।
अध्ययनले १२ देखि १६ नोभेम्बरबीच टेलिभिजनमा देखाईएको बिज्ञापनको संश्लेषण गरेकोथियो । टेलिभिजनमा भाजपाले बनाएको बिज्ञापन मात्र २२,०९९ पटक देखाईएकोथियो । भाजपाले अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उछिनेर नम्बर एक स्थान लिएको अध्ययनको सार थियो । यसरी बिज्ञापन गर्नेमा प्रतिपक्ष काग्रेंस दशौं स्थान भन्दा पनि तल देखिन्छ ।
प्रिन्ट,अनलाईन, टेलिभिजन र होडिङबोर्डभरी बिज्ञापनको लस्कर लगाईदिने विशेषता नै बोकेको मोदी सरकारले सेप्टेम्बर २०१४ देखि सेप्टेम्बर २०१८ भित्र ४९९६.६१ करोड भारु बिज्ञापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसमध्ये २२११.११ करोड इलेक्ट्रोनिक मीडियामा खर्च गरिएकोहो ।
जबकि नेपालमा ओली सरकारले झैं हरेक गल्तिको अपजस पूर्ववर्ती सरकारमाथि थोपर्दै आईरहेको मोदी सरकार भन्दा काग्रेंस आईको नेतृत्वमा बनेको यूपीए सरकारले दश बर्षे कार्यकालमा जम्मा ५०४ करोड भारु बिज्ञापनमा खर्च गरेकोथियो । मीडियाको मुख थुन्न यस्तो लगानी गरिएको बिश्वास गरिन्छ ।
आफुलाई समाजवाद उन्मुख दावी गर्दै आएको वाम सरकारले जसरी तामाझाम सहित बजार र मीडियालाई साथ लिएर प्रचारबाजी गरेकोछ, कम्तिमा त्यसले ओली सरकार पनि मोदी सरकारकै पथबाट मोहित छ भन्ने देखाउँदछ ।
Tags: Free Press Nepalissue-4अंक-४फ्री प्रेस नेपाल